Topnews:-Kismayo oo dagaal qarka u saaran-Maleeshiyo beeleed gudaha u galay !
31 March 2013 Waagacusub.com-Maleeshiyo beeleed ka tegay Gedo ayaa gudaha u galay Magaalo xeebeedka Kismayo kadib markii uu fashil ku dhamaaday wada hadal u socday Dowladda Federalka Somalia iyo Jabhadda Raaskambooni.
Alshabaab oo si dadban u xukuma odoyaasha dhaqanka meelaha laga xoreeyay ayaa ku guuleystay inay magaalada ku soo aruuriyaan maliishiyaad hubaysan oo iyaga ah balse arintaas waxaa caqabad ku noqday beelihii kala duwanaa degaanka oo ku heshiin waayey inay qeybsadaan 100 ciidanka ah oo Raisul wasaaraha Soomaaliya Saacid u balan qaaday inuu xafiiskiisu mushaar siin doono.
Maleeshiyada beesha Mareexaan ayaa fariisin ka sameeystay Warshadda Hilibka Kismayo ,waxaana suurtagala in dagaal dhaco .sida Wariyeyaasha jooga Kismayo ku waramayaan.
Hogaamiye kooxeedka Maleeshiyadda beesha Ogaadeen ee Jabhadda Raaskambooni Mr Ahmed Madoobe ayaa ku hanjabay inuu qoriga caaradiisa uga saari doono Kismayo Maleeshiyo uu sheegay inay Gedo ka soo duuleen.
Ahmed Madoobe oo ka tirsanaan jiray golahii Maxaakiimta garabka Al-Shabaab wuxuu mudo dheer ku xirnaa dalka Ethiopia.
Ra''isulwasaraha Xukumadda Somalia Mr Saacid ayaa markii uu ka laabtay safar uu ku tegay Kismayo wuxuu Wabaahinta u sheegay in wada hadaladii uu la yeeshay Ahmed Madoobe iyo xulufadiisa ku dhamaadeen isfaham waa la xiriira habka loo dhisayo Maamul goboleedka Jubbaland.
Inkastoo Kismayo tahay Magaalo istiraatiijiya oo mar walba dagaal oogayaal siyaasadeed ku loolamaan maamulkeeda hadana waxaa la rumeeysan yahay in xiisada ka aloosan tahay mid Dowladaha Ethiopia iyo Kenya ka hagayaan daaha gadaashiisa. Halkaan ka Daawo Warbixino xaqiiqa noqday.